China Imilebe yeglosi yeglosi yabucala ileyibhile yabucala yesiko ekhazimlayo ilipgloss yevegan kunye nenkohlakalo mahala iiglosi zeglosi zemilebe zefektri kunye nababoneleli | Iris Ubuhle
Umlebe onqunu wegloss ileyibhile yabucala yesiko unqunu umenyezwe lipgloss vegan kunye nenkohlakalo esimahla yeeglosi zemilebe ze
IVegan kunye neNkohlakalo yasimahla engancangathi yomilebe weglosi, imtyibilizi kwaye imenyezela. Ithambisa imilebe ngeeVithamini kunye nebhotolo yeShea.
Igloss yethu yomlomo yiVegan & Cruelty free, ine-Soft texture, ayincangathi emilebeni, ifumile kwaye iyabengezela.
Le gloss yomlomo isisityebi kwi-Vitamin E yendalo, ekhusela ngokufanelekileyo umlomo, yenza ifilimu ekhuselayo yomlomo omanzi, ikhusela ukulahleka komswakama, inciphisa imigca emihle kunye nemilebe eyomileyo kunye ne-peeling. Buyisela iglosi yemilebe, yenza imilebe ithambe kwaye igudiswe, kwaye uzive ugcwele ukufuma.
Ifanelekile kwiindibano zosapho okanye abahlobo, imiboniso yefashoni, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nokunye. Ubungakanani obuphathekayo bukuvumela ukuba uhombise imilebe yakho nanini na, naphi na. Imibala engama-65 eyahlukeneyo enokuthi idityaniswe ngokulula kunye neendlela ezahlukeneyo zokuzihombisa, amaxesha kunye neetoni zolusu.
Igama lento Iglosi yomlomo
A: Okokuqala, sazise imfuneko yakho malunga nezinto, emva koko siya kunika ingcebiso ngokufanelekileyo kwaye sinikeze ikowuteshini, iyonke sinemibala engama-65 yeglosi yomlomo wethu. Nje ukuba zonke iinkcukacha ziqinisekisiwe zingathumela iisampuli. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa ukuba iodolo yenziwe.
Ngaphambili: Umthengisi we-Lipgloss imilebe yesiko leglosi yabucala ileyibhile ye-diy creamy lipgloss
Okulandelayo: intonga yolebe ethengisa imilebe yesiko ilogo yevegan velvet lip stick yabucala ilebula yomlomo welipstick ephantsi moq makeup lip stick
umenzi weglosi yomlomo
isiko lomthengisi weglosi yomlomo
lipgloss umthengisi isiko
lipgloss ihoseyili akukho ileyibhile yabucala
ileyibheli yabucala idlupper umlomo
Iglosi yomlomo ebengezelayo
ileyibhile yabucala ecwebezelayo yomlomo weglosi
Ihoseyile ye-lipgloss ilogo yesiko ye-pigment lip glos...